कोरोना महामारीबीच बढ्दो लापरवाही : संक्रमण बढेको बढ्यै, तर छैन सावधानी !
रूपन्देही दैनिक सरदर ६५ जनामा कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ, त्यसमध्ये सरदर ३५ जना प्रदेश राजधानी बुटवलकै हुन्छन् ।
यो संक्रमण दर प्रदेशका सबै जिल्लामा संक्रमितको ६० प्रतिशतसम्म हुन आउँछ । शुक्रबारसम्म प्रदेश राजधानी बुटवलमा मात्रै संक्रमितको संख्या १ हजार ७२ जना पुगेको छ ।
जिल्लाभरमा २ हजार ७०२ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
त्यसका अलावा बुटवलको कोभिड अस्पतालमा दैनिकजसो एक जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुन थालेको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लामा संक्रमण दर कम देखिए पनि रुपन्देहीमा संक्रमितको संख्याले दिनहुँ थपिइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र हुँदै गए पनि बजारमा कुनै स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको देखिँदैन ।
बजार र यातायात पूर्ण रूपमा खुलेपछि थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहे पनि असुरक्षित तबरले भीडभाड र आवागमन भइरहँदा कोरोना नियन्त्रणको कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।
संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाको परीक्षणमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ध्यान दिएका छैनन् ।
यही असोज १ गतेदेखि बजार पूर्ण रूपमा खुलेर जनजीवन सहज बनेपछि सर्वसाधारणले कोभिड— १९ लाई हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ ।
सपिङ मल, व्यापारिक केन्द्रमा सर्वसाधारणको असुरक्षित भीड थामि नसक्नु हुन थालेको छ ।
सेवाग्राही र यात्रुको सम्पर्कमा आउने व्यापारी र यातायात व्यवसायीले नै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सावधानी कतै अपनाएको देखिँदैन । असुरक्षित चहलपहलले स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने चिकित्सकहरूको चिन्ता छ ।
बुटवलस्थित कोभिड अस्पतालका फोकल पर्सन तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाले अबको अवस्थामा व्यक्ति आफैँ सचेत र सावधान हुनुपर्ने बताए ।
जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दा संक्रमण अझै बढ्ने थापा बताउँछन् ।
‘अब व्यक्ति आफैं सचेत नहुने हो भने संक्रमण रोकिने देखिँदैन । भौतिक दुरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउने, नियमित हात धुने र हात धुने अवस्था नभए स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । यति गर्न सकेमा संक्रमण फैलिनबाट धेरै रोक्न सकिन्छ,’ थापाले भने ।
संक्रमण कारण बढिरहेको छ, नियन्त्रण के गरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजना प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाले कुनै रणनीति बनाउन सकेको देखिँदैन ।
लक्षण देखिएकाहरूले आफै जाँच गरेर पुष्टि भएकाहरू गणना गर्नमा मात्र स्थानीय तहहरू केन्द्रित छन् । प्रदेश पाँचका १२ जिल्लामा १० हजार ९१८ संक्रमित पुगेका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका डा. सागर न्यौपानेले कोरोना संक्रमण समाजमा डढेलो जस्तै फैलिएको बताए । ‘कोरोना निकै महंगो सावित हुँदैछ, हाम्रो समाजका लागि । समाज असहिष्णु बन्दैछ ।
वृद्धवृद्धा र रोगीहरूलाई संक्रमण आफ्नैले सारिरहेका छन् । हामी सबै सचेत नहुने हो भने बजार खुलेपछि सोच्न पनि नसकिने अवस्था आउन सक्छ,’ न्यौपानेले भने ।
प्रदेशमा अहिलेसम्म ७७ जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ । अहिले यस प्रदेशमा संक्रमितको ६० प्रतिशत होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन् ।
सरकारले होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने प्रावधान ल्याएपछि संक्रमण देखिएका तर, लक्षण कम भएकाहरू घरमै बस्न थालेका हुन् ।
प्रदेशमा झण्डै १ हजार ५ सय जना होम आइसोलेसनमा छन् । घरमा बस्दा अरूलाई संक्रमण सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
पछिल्लो समय परिवारका एक व्यक्तिमा कोरोना देखिए परिवारका सबैमा संक्रमण फैलिएको देखिँदै आएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले प्रदेशका नागरिकहरूलाई सचेतनासँगै सावधानी अपनाउनका लागि निरन्तर सूचित गरिरहेको दाबी गरे ।
अहिलेसम्म प्रदेश पाँचमा १ लाख १३ हजार ६३३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
पार्किङ र फोहोरले अस्तव्यस्त पाशुपत क्षेत्र, आर्यघाटमा...